သူငယ်ချင်းတို့အတွက် Desktop ပေါ်မှာ နာရီနှင့်Albums Gadgetsလုပ်ရန် ...HTC Home... | အိမ်လွမ်းသူ...
သူငယ်ချင်းတို့အတွက် Desktop ပေါ်မှာ နာရီနှင့်Albums Gadgetsလုပ်ရန် ...HTC Home...
ကျွန်တော်ဒီနေ့ သူငယ်ချင်းတို့အတွက် ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ နာရီနှင့်ဓါတ်ပုံ Albums Gadgets လေးတွေလုပ်ရန် HTC home...ဆော့(ဖ်)ဝ်လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...!ကိုယ့်ရဲ့ ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ သူများနှင့်မတူအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ပါ...သိပြီးသား သူငယ်ချင်းတွေကလည်း သီးခံပါလို့ပြေားပါရစေ...!ကျွန်တော်လည်း ရှာတွေ့သမျှ ကောင်းသောအရာလေးတွေကို သူငယ်ချင်းတို့အားမျှဝေစေချင်သော ဆန္ဒနှင့်ပါ...!
အောက်မှာ Media Fire လေးဖြင့်တင်ပေးထားပါတယ်....!လိုချင်ရင်ယူသွားပါလို့ ပြေားပါရစေ...!
အားလုံးသော သူငယ်ချင်းအပေါင်း ပျော်ရွှင်ချင်းများဖြင့် ပြည့်စုံပါစေလို့ ......!
"ဒီနေရာမှာ ယူသွားပါ..." အဆင်ပြေပါစေ...!
No Response to "သူငယ်ချင်းတို့အတွက် Desktop ပေါ်မှာ နာရီနှင့်Albums Gadgetsလုပ်ရန် ...HTC Home..."